अत्यन्तै दु’खी र अ’भागी हुन्छन् यी ३ कुरा भएका पुरुष,कहिल्यै बन्न सक्दैनन् सुखी – AB Sansar
अत्यन्तै दु’खी र अ’भागी हुन्छन् यी ३ कुरा भएका पुरुष,कहिल्यै बन्न सक्दैनन् सुखी
October 16, 2020 Ab-संसारLeaveaComment on अत्यन्तै दु’खी र अ’भागी हुन्छन् यी ३ कुरा भएका पुरुष,कहिल्यै बन्न सक्दैनन् सुखी
काठमाडौँ । जीवनमा भाग्यको निकै चर्चा हुने गर्छ । भाग्यमानीहरु सुख समृद्धि र खुसी जीवन बिताएका हुन्छन् । अभागी दुखले जीवनमा खुसी भन्ने कहिल्यै पाउँदैनन् । उनीहरुको जीवन चिन्ताले भरिएको हुन्छ । कुनै व्यक्ति जीवनमा कति भाग्यमानी छ भन्ने कुरा उसको परिस्थिती हेरेर बुझ्न सकिन्छ । शास्त्रमा केही कुराहरु भनिएका छन् । जुन कुराहरु भएका व्यक्तिलाई अभागी भनिएको छ ।
वृद्धकाले मृता भार्या बन्धुहस्ते गतं धनम्।
भोजनं च पराधीनं त्रयस् पुंसां विडम्बनास्।।
चाणक्य निति : यदि कुनै पुरुषको श्रीमतीको मृत्यु हुन्छ अर्कैसँग गइन् भने त्यो दु’र्भाग्य हो । तर यौनअवस्थामा नै जीवन साथीको साथ छुट्छ भने त्यो पुरुषले पुुुुन विवाह त गर्न सक्लान । तर उमेर ढल्केपछि विवाह होला यो जीन्दगीको सबैभन्दा दुखद क्षण हो ।
पुरुषहरुलाई बुढेसकालसम्म पनि पत्नीको खाँचो हुन्छ । बुढेसकालमा एक्लो हुनु निरास र दिक्दार जिन्दगी हुनु हो । त्यसकारण यस्तो पुरुषलाई अभागी पुरुष भनिएको हो ।
२.शत्रुको हातमा परेको धन : यदि कुनै पुरुष व्यक्तिको धन खराब व्यक्तिमा परेको छ भने त्यो व्यक्ति साच्चै अभागी हुन्छ । आफुले दुख कष्ट गरेर कमाएको धन अरुको हातमा पर्नु भनेको दुर्भाग्य हो । त्यो धन कुनै बेला आफ्नै विरुद्धमा प्रयोग हुन पनि सक्छ ।
३.अरुको घरमा गुलाम : कुनै पुरुष व्यक्तिको लागि अरुको घरमा गुलामी बनेर बस्नु सबैभन्दा दुखद कुरा हो । यस्तो व्यक्तिलाई अरुको काम गर्दा भनाइ सहनुपर्छ । अरुको घरमा बस्नु स्वतन्त्रता हुँदैन् । यस्तो व्यक्तिको तन मनले नै आफु अभागी रहेको महसुस गर्छ । त्यसकारण जो कोही पुरुष व्यक्तिले यस्तो कुराहरुबाट जागाउनु पर्छ ।
आज देखि १४ दिनसम्म लकडाउनको घोषणा !
लाखौमा बिक्रि भैरहेको सुनको मुल्य, आज भने पत्याउनै नसकिने गरि यस्तो भयो !
रोचक १४ बर्षकी छात्राले प’रिक्षामा याै/न शि’क्षाबारे यस्तो ले’खेपछि सा’माजिक सं’जालमा भयाे भा’इरल ।
August 28, 2021 August 28, 2021 Ab-संसार
बग बाउन्टीबाट लखपति बन्दै विद्यार्थीहरू
March 27, 2021 santosh
यि हुन् नेपालमै टिकटकबाट महिनाको २ लाख भन्दा बढी कमाउने युवा
July 14, 2021 Ab-संसार
श्रीमानसंग सुतेकी थिईन्, आधारातमा कसैले शरीर खेलायो, श्रीमान सम्झेर आँखा खोल्दा होसै उड्यो……! October 22, 2021
गर्भवती हुँदा के खाएमा छो’रा जन्मन्छ ? र बच्चा गोरो हुन्छ ? जानी राखौ.. October 22, 2021
नेपाली फिल्म ‘एक्सन नाइन’मा सुनिल शेट्टीको इन्ट्री October 22, 2021
यी २१ बर्षिया युवती शालिनीले पाइन गुगोलमा ६० लाखको जागीर October 22, 2021
चोरलाई लुटेको अभियोगमा चार प्रहरी जेलमा October 22, 2021